LinuxCapable - Pejy 50 amin'ny 50 - Lahatsoratra, Howtos ary Tutorials Linux
Ahoana ny fametrahana sy fanamboarana ny fanavaozana tsy voakarakara amin'ny Ubuntu 20.04
Talata, Janoary 4, 2022 Saturday, May 22, 2021 by Joshua James
Ny fitazonana ny rafitrao ho vaovao dia zava-dehibe ho an'ny rehetra avy amin'ny mpampiasa desktop tsotra, mpamorona, sysadmins; Eny ary, andao hiatrika izany, na iza na iza manana fitaovana mifandray amin'ny Internet. Ubuntu, amin'ny alàlan'ny default, dia tsy natsangana ho an'ny fanavaozana mandeha ho azy. Na izany aza, amin'ny alàlan'ny fampandehanana sy ny fanamafisana ireo fonosana fanavaozana tsy voakarakara, azonao atao…
Sokajy Ubuntu Tags Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa
Ahoana ny fametrahana Microsoft Edge amin'ny Ubuntu 20.04
Alakamisy Janoary 13, 2022 Friday, May 21, 2021 by Joshua James
Ireo mpampiasa Ubuntu amin'izao fotoana izao, amin'ny alàlan'ny default, dia voafetra amin'ny Firefox Internet Browser. Na izany aza, maro ny safidy azo apetraka. Microsoft Edge dia safidy iray izay efa teo amin'ny fampandrosoana nandritra ny herintaona ary nahazo hevitra tsara be dia be teo amin'ireo vondrom-piarahamonina fizarana Linux ary mety ho safidy hafa raha oharina amin'ny ...
Sokajy Ubuntu Tags Browser an'ny Microsoft Edge, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa
Ahoana ny fametrahana Plex Media Server amin'ny Ubuntu 20.04
Alahady Oktobra 31, 2021 Friday, May 21, 2021 by Joshua James
Ny Plex Media Server dia rindrambaiko hitahiry ny atiny media nomerika rehetra sy ny fidirana amin'ny alàlan'ny rindranasa mpanjifa toy ny fahitalavitra, NVIDIA Shield, Roku, Mobile App, ary sehatra maro hafa. Ny Plex Media Server dia mandamina ny rakitrao sy ny atiny ho sokajy. Tena malaza amin'ny olona mitahiry Fahitalavitra sy…
Sokajy Ubuntu Tags Plex Media Server, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa
Ahoana ny fametrahana / fanavaozana farany Nginx Mainline / Stable amin'ny Ubuntu 20.04
Alakamisy Oktobra Oktobra 28, 2021 Friday, May 21, 2021 by Joshua James
Ho an'ireo izay mampiasa Ubuntu 20.04 LTS, mety ho nahatsikaritra ianao fa ny fametrahana Nginx mivantana avy amin'ny tahiry dia tsy mametraka ny dikan-teny stable na mainline farany. Ity dia fironana mahazatra amin'ny ankamaroan'ny fizarana izay mifantoka amin'ny fahamarinan'ny fonosana ary tsy manome afa-tsy bug na fanavaozana fiarovana maika mandra-pahatonga…
Sokajy Ubuntu Tags NGINX, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa
← Previous pejy1 ... pejy49 pejy50